Translate Georgian to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Georgian to Myanmar (Burmese), Georgian to Myanmar (Burmese) translations, Georgian to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
გამარჯობა როგორ ხარ မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
არის ვინმეს? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
მე ძალიან მიყვარხარ ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
რამდენად ღირს ჰამბურგერი? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
შეგიძლიათ დარეკოთ ტაქსი? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
მე დაინტერესებული ვარ ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
ჩემი ფრენა გადაიდო အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
მე აქ ვარ ბიზნესისთვის ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
გამარჯობა, ჩემი სახელია မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
მე ვწუხვარ, მაგრამ მე ცოლად ვარ ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
მინდა გკითხოთ ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
შეგიძლიათ აეროპორტში მიმიყვანო? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
ახლა რა დროა, გთხოვთ? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
სად არის უახლოესი პოლიცია? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
შემიძლია დავუბრუნო თქვენი ტელეფონის დამტენი? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
შეგიძლიათ დამეხმაროთ? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
დამირეკეთ სასმელი, გთხოვთ? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
რა ღირს? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
მე ალერგიული ვარ წებოვანა ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
დარეკეთ ექიმს ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
არის ექიმი? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
მაქვს ზარი? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
დამირეკეთ თქვენი ბოსი გთხოვთ. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
ეს ადგილი ძალიან სასიამოვნოა ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
მიმიყვანეთ სასტუმროში ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
რა არის ჩემი ოთახი ნომერი? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?